Gudaha Nalka Laydhka Iftiinka, Tube Tube, Iftiinka Shumaca Gudaha - Aina
Laydh badan oo weligood ah: Iyada oo leh nalalkayaga kala duwan ee ballaadhan, waxaan hadda ku siineynaa xulasho xiiso leh oo ah alaabooyin loogu talagalay baahiyo ballaadhan oo ballaaran - iyo waxyaabo cusub oo cusub.
U adeegso ficilkeena si aad ugu abuurto qiime macaamiisha
Casriga 4-nasiibka Nalalka Iftiiminta Daar Mount Ceil ...
Dunida xiisaha leh ee nalalka LED-ka
U oggolow naftaada inay ku dhiirrigeliso sheekooyin aad u kala duwan oo LED ah
Nalal casri ah oo aan qaali ahayn oo leh LED
Energy Harness, Jaamacadda Purdue ee ku xiran soo saaraha nalalka LED-ka ayaa soo saarta hawo jeermiska hawada kaas oo lagu dhejin karo saqafka si looga nadiifiyo hawada qaybta kore ee qolka iyada oo la adeegsanayo iftiinka UVC oo ay keeneen LED-yada gundhigga ah. Sida laga soo xigtay Jaamacadda Purdue, aaladda waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo ...
Aina Laydhku waxay soosaaraysaa laydh cusub oo loo yaqaan Bright-Mate Bright -Mate: Iftiinka la qaadan karo ee loogu talagalay ciyaarta iyo ka shaqaynta meel kasta Wax soo saarkani wuxuu isku daraa nalalka 30W ee sare ee korantada, baytariyada karti-sare leh, iyo qaababka taageeraya ee ku yaal meel xagal dheer oo saddex xagal leh oo leh dhinac dhinac ah ee 98mm. Aad ayey ...
Aina Lighting waxay samaysay Xafiiska Beijing bishii Sebtember 16th, 2019. Aina Lighting waxaa la aasaasay 2016, illaa iyo iminkaba waa 6 sano. Dhammaan 6-daan sano, waxaan ku leenahay hal xafiis iib oo ku yaal Shanghai. Maaddaama iibka badan ee aan hayno, hal xafiis oo iib ah horeyba nooguma filna, sidaa darteed waxaan u dooranay Beijing inay tahay meesha ...
Isku-darka xiisaha leh ee qaababka guridda, tikniyoolajiyadda fiilada casriga ah, iftiinka quruxda badan iyo waxtarka tamarta
4 Isku-darka YouTube0-10Vdimmer